Mombamomba ny orinasa | Anping County Kaixuan Stainless Steel Products Co., Ltd.
Izahay, combo mpamokatra sy varotra, mamokatra sy manondrana fittings fantsom-by sy valves baolina hatramin'ny 2002, indrindra mifantoka amin'ny fittings fantsom-by vy sy valves baolina vy.
Izahay dia ekipa an'ny fianakaviana, Andriamatoa Yan mirahalahy dia nanangana KX Co. (Anping county KaiXuan stainless steel vokatra Co., Ltd.) ary nanangana ilay zavamaniry tamin'ny taona 2002. fampandrosoana, paikady ary marketing.
Ny orinasa mpanamboatra
Ny orinasanay dia manarona faritra 20000 metatra toradroa, atrikasa fanariana 5000 metatra toradroa, atrikasa milina 5000 metatra toradroa.
Tatitra momba ny fivarotana isan-taona
Mba hanomezana ny mpanjifa vokatra sy serivisy sarobidy indrindra.
Mba hanomezana fotoana tsara indrindra ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsirairay amin'ny asany mba hiasa mandritra ny fotoana maharitra sy mafy hahatratrarana ny fahaizany ambony indrindra. Hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana sosialy. Ny fananganana ny orinasantsika ho indostria mitarika hampitomboana ny famokarana sy hamoronana asa vaovao, hamoronana famatsiana azo antoka ny entana amidy ary serivisy afaka mamaly ny fitakiana amin'ny ho avy.
Mamorona fiainana milamina sy avo lenta ho an'ny mpiasa rehetra sy ny fianakaviany.
Manome vokatra miavaka sy serivisy tsy manam-paharoa izahay, miaraka, manome lanja premium ho an'ny mpanjifanay.
Izahay dia mitazona ny fenitra avo lenta amin'ny tsy fivadihana amin'ny hetsika rehetra ataontsika.
Miara-miasa izahay hanomezana izay ilain'ny mpanjifanay sy hanampiana ny orinasa handresy.
Manome lanja ny firenentsika izahay, mamporisika ny fivoarany ary manome valisoa ny zava-bitany.
Mampiseho finiavana mafy handresy eo amin'ny tsena sy amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasa izahay.
Izahay no ho mpiara-miasa aminy sarobidy indrindra amin'ny mpanjifanay rehetra.